ကုန်ဈေးတန်းအလယ်လမ်း createcodes155@gmail.com ဘာသာစကားMM|EN
အမိမြန်မာမြေ သာယာဖို့ Recycling လုပ်ကြစို့။
ကျွန်တော်တို့သည် ဟိုတယ်များ၊စားသောက်ဆိုင်များ၊စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊နေအိမ်အစရှိသောနေရာများမှ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောပစည်းများကို ရောင်းလိုသူ၏နေရာထိလာရောက်ဝယ်ယူပြီး recycling စက်ရုံများကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ခြင်း၊မရှင်သန်နိုင်ခြင်းများကို Recycle MMနှင့်အတူကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
Recycle မလုပ်ပဲနေလျှင် ပစည်းအသစ်များကို အမြဲအသစ်အသစ် စာရွက်များကိုလဲ အမြဲအသစ်ထုတ်နေရသည့်တွက် သဘာဝရင်းမြစ်များကုန်ခမ်းမှုကို Recycle MMနှင့်အတူထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
ပစည်းအသစ်များကို ခနခနထုတ်နေရသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ မလိုပဲများပြားနေသည်ကို Recyle MMအားဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်
ကျွန်တော်တို့ Recycle MMသည် မိတ်ဆွေ၏ အသုံးမလိုသော စွန့်ပစ်များကို အိမ်တိုင်ရာရောက် ၀ယ်ယူပြီး recycling စက်ရုံများကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသော ကုပဏီဖြစ်ပါသည်။မိတ်ဆွေသည် ကျွန်တော်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပြီး ယခုပင် စွန့်ပစ်ပစည်းများမှ ပိုက်ဆံပြန်လည်ရယူလိုက်ပါ။
မိတ်ဆွေ၏ အသုံးမလိုသောစွန့်ပစ်ပစည်းများမှ ပိုက်ဆံရှာလိုပါသလား?Recycle MM တွင် ယခုပင် ဘွတ်ကင်တင်လိုက်ပါ။
ပလပ်စတစ်၊ရေသန့်ဘူးခွံ၊ ပုလင်းများ၊ကားတာယာ စသောစွန့်ပစ်ပစည်းများကို ရောင်းလိုပါက အိမ်အထိလာရောက်ဝယ်သော Recycle MMအားသတိရလိုက်ပါ။
စွန့်ပစ်ပစည်းများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျှမက မိတ်ဆွေ၏ နေအိမ်ကိုပါ ညစ်နွမ်းစေပါသည်။မလိုသောစွန့်ပစ်ပစည်းမျာကိုRecycle MMတွင်ရောင်းပြီး ပိုက်ဆံရယူလိုက်ပါ။
Recycle MM မှ ကြိုဆိုပါတယ်
Recycle MMသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး recycling ကုပဏီဖြစ်သည်မို့ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် ပိုက်ဆံရယူနိုင်ပါပြီ။
ကျွှန်တော်တို့ ကုပဏီသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေသော ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရသော အသုံးပြုပြီးသား စွန့်ပစ်ပစည်းများကိုအကျိုးရှိစွာပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တည်ထောင်ထားပါသည်။ကျွန်တော်တို့သည် hotelများ၊စားသောက်ဆိုင်များ၊စက်ရုံ အလုပ်ရုံများမှ ရေသန့်ဘူးခွံများ အခြားပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရသောစွန်ပစ်ပစည်းများကို recyclingပြန်လည်လုပ်ပေးသောစက်ရုံများကိုပို့ဆောင်ပေးသော platformတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Recycle MMနှင့် အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စွန့်ပစ်ပစည်းများကို စနစ်တကျ အသုံးပြုနိုင်မည့်အပြင် မိတ်ဆွေ၏ စွန့်ပစ်ပစည်းများမှ ပိုက်ဆံ ပြန်လည်ရရှိနိုင်သည့် အတွက် မိတ်ဆွေ၏ မိသားစုအတွက်ရော မိတ်ဆွေများအတွက်ပါ ကောင်းမွန်သောပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။မိတ်ဆွေ၏ အသုံးမလိုသောစွန့်ပစ်ပစည်းများအားကျွန်တော်တို့ Recycle MMမှ တာဝန်ယူသည်မို့ အခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Recycle MMနှင့်အတူ ဘာကြောင့် recycling လုပ်သင့်သလဲ?
Recycle MMသည် မိတ်ဆွေ၏ အသုံးမလိုသောစွန့်ပစ်ပစည်းများအား ၀ယ်ယူသည့်အတွက် မိတ်ဆွေတွက် အပိုဝင်ငွေရရှိခြင်း၊အသုံးမလိုသော ပစည်းများကို နေအိမ်ထိ အမြန်ဆန်ဆုံး လာရောက်ဝယ်ယူခြင်း။Recyle MMနှင့်အတူ Recyclingလုပ်ခြင်းဖြင့်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမှိုက်များကို သေချာစည်ကမ်းတကျ မပစ်သောသူများကြောင့် ယခုအချိန်ထိတွေ့ကြုံနေရသောရေမြေင်းပိတ်ဆို့မှုများကို Recycle MMနှင့်အတူ recycleလုပ်ခြင်းဖြင့်လျော့ချနိုင်ပါသည်။
ရေသန့်ဘူးခွံများ ပလပ်စတစ်အိတ်များစသော စွန့်ပစ်ပစည်းများသည် မြေကြီးထဲ ရောက်နေသောကြောင့် အပင်များစိုက်ပျိုးလို့မရနိုင်၊အပင်များကောင်းမွန်စွာမကြီးထွားနိုင်သောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ညစ်ညမ်းမှုများကို Recycle MMနှင့်အတူ လျော့ချနိုင်ပါသည်။
မိတ်ဆွေ၏ နေအိမ်၊စားသောက်ဆိုင်၊hotel စသောနေရာများတွင် အသုံးမပြုတော့သောစွန့်ပစ်ပစည်းများဖြင့် Recycle MMအားဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အပိုဝင်ငွေ အလွယ်တကူရှာနိုင်ပါသည်။
အသုံးမ၀င်ဟုထင်သော ကားတာယာ အစုတ်အဟောင်းများသည် ရေပုံး၊၀က်စားခွက် စသော ခိုင်ခံသောပစည်းများပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သည့်တွက် တောင်သူလယ်သမား ဧရာဝတီတိုင်းသားများတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောကြောင့် မိတ်ဆွေ၏ ကားတာယာအစုတ်များမှ အပိုဝင်ငွေရအောင် Recycle MMအားအခုပဲခေါ်ဆိုလိုက်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ Recycle MMသည် ပလပ်စတစ်၊ရေသန့်ဘူးခွံ၊ပုလင်းများ၊အသုံးမပြုသော ကားတာယာများ၊ စာအုပ် သတင်းစာ စက္ကူများကို အိမ်ထိလာရောက် သယ်ဆောင်ဝယ်သူသော ၀န်ဆောင်မှု ဖြစ်သည်မို့ အခုပဲ booking သို့မဟုတ် ဖုန်းခေါ်ဖိုလိုက်ပါ။
၁၅ မိနစ်အတွင်း | free၀န်ဆောင်မှု
ကျွန်တော်တို့သည် အပတ်စဉ် recycling ဗဟုသုတများကို တင်ပေးခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် တိုက်တွန်းနေပါသည်။မိတ်ဆွေသည် စွန့်ပစ်ပစည်းများကို မည်သို့ စနစ်တကျ စွန့်ပစ်ရမည်ကို စိတ်ဝင်စားပါက subscribe လုပ်ထားစေချင်ပါသည်။
မိမိ၏ကလေးများကိုမိဘများကသင်ကြားပေးသင့်သော Recycling စာအုပ်၁၀အုပ်
မိမိ၏ ကလေးများကို recycling အကြောင်းသင်ပေးခြင်းမှာ အရမ်းကိုအရေးပါပါသည်။ဒါမှသာ သူတို့လေးများသည်နောင်လာမည့် အနာဂတ်အတွက် အတွေးကောင်းသောကလေးများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။..
Si Thu 14 Jan,2018 4
Environmentalနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ဘာသာရပ်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ environmental sciences နဲ့ environmental studies ကို လူတော်တော်များများက ဘယ်ဘာသာကိုလေ့လာသင့်လဲဝေခွဲမရဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီဘာသာ နှစ်ခုရဲ့ ကွာခြားချက်...
အိမ်တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော Eco-Organize ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများ
ဒီဆောင်းပါးကိုတော့ ဗဟုသုတ အနေနဲ့ ဖတ်စေချင်လို့ရေးသားပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။အဓိကပလပ်စတစ် အမျိုးအစားများမှာ ၁။Polyethylene Terephthalate (PET) – PET ဘူးများ၊ ပလပ်စတစ်ဂျားများ၊ ထည့်စရာများ...
2018 © Copyright, Recycle MM. All Rights Reserved.
အချိန်*: 10:00 am 10:30 am 11:00 am 11:30 am 12:00 pm 12:30 pm 1:00 pm 1:30 pm 2:00 pm 2:30 pm 3:00 pm 3:30 pm 4:00 pm 4:30 pm